Brexit: Vaky Fo, Fa Tsy Vaky (Potika) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jona 2016 7:21 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, عربي, русский, Ελληνικά, Français, English
Naha-ana ny nanaraka ny referendum. [Naha-ana] ny manenja-tena raha misy olona eo an'efi-trano manonona UKIP, na Brexit. [Naha-ana] ny tsy maintsy niteny tamin'olona iray “fa mpanavakava-bolonkoditra ry zareo” ka tsenain'ny “fa misy dikany ny hevitra ara-toekarendry zareo” avy amin'olona nohajaiko taloha—sy ny mahatsapa avy amin'ny tena hatrany fa maro amintsika no tsy manana olana amin'ny tsy firaharahiana ny fahateren-tsaina rehefa mety amintsika izany. Raha mahalala ny toe-draharaha politika fony tonga avy any Bangladesh tamin'ny taompolo 70 ny ray aman-dreniko, dia tahaka ny hoe tsy azo natao ny nihalehibe tao amin'ny Fanjakana Mitambatra (UK), na ny manana ireo fanararaotra natolotra ahy nandritra ny fahazazako.
Hafahafa ny nijery avy aty ivelan'ny firenena ilay fihetseham-po tsy tia mpifindramonina, tsy tia vahiny nahazo vahana tao amin'ny Fanjakana Mitambatra (UK). Tamin'ny voalohany aho niezaka ny tsy hiraharaha izany. Nanana izay tombony manokana izay aho: Monina eto Berlin aho, tsy dia mahatratra ahy loatra io. Avy eo aho niha-nahatsikaritra hatrany. Nanomboka niresaka azy ity tamin'ny namako aho, ny hanolotena an-tserasera, ary omaly, niverina aho tamin'ny minitra vitsivitsy farany tamin'ny fanentanana hijanonana [ao anaty vondrona eoropeanina] tamin'ny androm-pifidianana. Afa-mirehareha aho nanao izany, saingy nanenina be tokoa aho fa niandry fotoana ela vao niditra an-tsehatra bebe kokoa.
Sarotra ihany koa ny mijery hoe inona no mitranga. Iny no fanentanana maloto sy vetaveta indrindra tsy mbola hitako hatramin'izay niainako. Fipoahana mandravarava fanampiny ny namonoana an'i Jo Cox, saingy hoy i Alex Massie, tsy afa-mamerimberina ianao hoe BREAKING POINT [tafahoatra, an-tokonan'ny tsy avotra intsony], ary gaga rehefa misy olona vaky [potika]. Malahelo aho amin'ny valiny, malahelo aho tamin'ny fomba nanaovana ny fanentanana, ary malahelo aho tamin'ny fisongan'ny fihetseham-po elatra havanana miely manerana ny firenena. Tsy ity no firenena nahalehibe ahy.